AMARADIPA…….အမရဒီပ: June 2012
အေဒီ ၆ ရာစုနှင့် ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံးအက္ခရာ၊ ဦးစံသာအောင်
Arakanese Alphabets Used in AD4 and Before It. u San Thar Aung တခြားသူတွေကိုးကားတာတွေ့ ဖူးလို့ဖတ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်ရန်ကုန်စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်တွေမှာ ရှာမရခဲ့တဲ့ အဖိုးတန်စာအုပ်ပါ။ ကိုယ့်လိုသူတွေ အဆင်ပြေပြေဖတ်ခွင့်ရစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပါ.....။
Posted by amaradipa at 10:16 AM No comments:
မြောင်းမြဆရာတော်အရှင်ဉာနိက၏ ဘဝနှင့် သာသနာရေးအတွေ့ အကြုံ
Myaung Mya Sayadaw by Bbc u Nay Win မူရင်းစာအုပ်---ဘီဘီစီ ဦးနေဝင်း (လန်ဒန်)၏ ဆရာတော်ကြီးများနှင့်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းမှုများ
Posted by amaradipa at 2:00 PM No comments:
The Court Of Ava in 1855, အင်းဝရွှေနန်းရောက် ဗြိတိသျှသံအဖွဲ့ မှတ်တမ်း ၁၈၅၅
The-Court-of-Ava-in-1855 မြန်မာပြန်-တက္ကသိုလ်နေဝင်း၊ အင်းဝရွှေနန်းရောက်ဗြိတိသျှသံအဖွဲ့ မှတ်တမ်း (၁၈၅၅)
Posted by amaradipa at 7:26 PM No comments:
Posted by amaradipa at 11:28 AM No comments:
နိုင်ငံခြားရောက်သူများမိခင်ဘာသာစကား မပြောတတ်တာ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ပါ
Posted by amaradipa at 9:34 PM No comments:
ပြင်သစ်ပြန်မြန်မာသံအဖွဲ့ ရွှေစည်းခုံစေတီကို ဖူးမျှော်ကြည်ညို
ပြင်သစ်နိုင်ငံသွား မြန်မာသံကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင် ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်း
ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းဦးဆောင်တဲ့ မြန်မာသံတမန်အဖွဲ့ ဟာ ပြင်သစ်အပါအဝင်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဆီ သွားရောက်ပြီးနောက် နေရပ်ရတနာပုံနေပြည်တော်သို့ပြန်လာခဲ့ကြပါပြီ….။မြန်မာသံအဖွဲ့ ဟာ အသွား
ခရီးစဉ်တုန်းက ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကို ဖူးမြော်ကြည်ညိုခဲ့ကြသလို အပြန်ခရီးမှာလည်း စေတီတော်ကို
ပန်း၊ဆီမီး၊ရွှေပြားလှုဒါန်းပူဇော်သွားကြောင်း မှတ်တမ်းမှာတွေ့ ရတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘာသာရေး၊
ဒေသယုံကြည်မှု တွေကို ဖော်ပြထားတာ မတွေ့ ရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင်းမှတ်တမ်းစာကိုယ်အတိုင်းပဲ အသွားခရီးစဉ်၊ အပြန်ခရီးစဉ် အချိတ်အဆက်မိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သက္ကရာဇ် ၁၂၃၆၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၁ဝ ရက်၊
ခရစ်နှစ် ၁၈၇၄၊ အောက်တိုဘာလ ၅၊ တနင်္လာနေ့ 
"၄င်းလပြည့်ကျော် ၁ဝ၊ တနင်္လာနေ့ညောင်လှဆိပ်ကမ်းကထွက်ခဲ့ရာ စလေမြို့ သို့ ရောက်လျှင် စလေမြို့ အုပ်၊
မြို့ သူကြီးတို့ လှေနှင့်ဆီးကြို၍ သင်္ဘောတော်ကိုစက်ရပ်ပြီးလျှင် နုတ်ခွန်းဆက်လက်၊ မြို့ အုပ်မြို့ သူကြီးတို့ ပြန်
သွား၊ မရပ်မဆိုင်းထွက်လာကြသည်။ ၄င်းနေ့ ည ၇ နာရီအချိန် ပုဂံမြို့ ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်သည်။
နက်ဖြန် ရွှေစည်းခုံဘုရားကိုပူဇော်ရန် သံတော်အရာရှိ၊ အပေါင်းပါလူ၊ သင်္ဘောတော်အရာရှိ အပေါင်းပါလူ၊ သင်္ဘောစီးမိန်းမယောက်ျားတို့ စည်းဝေး၍ ရွှေဆိုင်းရေ ၃ဝ၊ ဖယောင်းမီးတိုင် ၂ဝဝဝ၊ ကျောက်မီးတိုင် ၃ဝ၊ ရေချမ်းအိုး ၂ဝဝ၊ စွန့် ကြဲရန် ပိုက်ဆံ ၆၄ဝ များကို သဒ္ဓါတရားရှိသည်အလျောက် စိုက်ထုတ်ကြသည်။ ၄င်းပရိသတ်တို့နံနက်စောစော
ဘုရားသို့ သွားရန် လှည်းများကိုလည်း အပြည့်အစုံ ပုဂံမြို့ ဝန်၊ စစ်ကဲ၊ မြို့ စာရေးတို့ က ဆင့်ဆိုပြင်ဆင်
အသင့်ထားကြသည်။ ၄င်းနေ့ ခရီး၂၅ တိုင်ရောက်သည်"
သက္ကရာဇ် ၁၂၃၆၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊
ခရစ်နှစ် ၁၈၇၄၊ အောက်တိုဘာလ ၆၊ အင်္ဂါနေ့ 
"၄င်းလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့နံနက် ၆ နာရီအချိန် အထက်စာပါ ပရိသတ်နှင့် သင်္ဘောတော်ကဆင်း၍
ရွှေစည်းခုံဘုရားသို့ သွားကြသည်။ မိန်းမယောက်ျား လူပေါင်း ၂ဝဝ တို့အသီးအသီး လှည်းစီးနင်း၍ မပင်မပန်း
မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းသို့ရောက်သည်။ ဘုရားသို့ ထွက်ခါနီးတွင် မိုးလည်းသည်းစွာရွာသည်။ ပြီးလျှင် မိုးစဲငြိမ်၍ ဘုရားသို့ ချမ်းချမ်းသာသာရောက်ရသည်။ မြတ်စွာဘုရားရင်ပြင်တော်သို့ ရောက်လျှင် အထက်စာပါ လှုဒါန်းပူဇော်ရန်များကို လှုဒါန်းပူဇော်ပြီးလျှင် ရေချမ်းအိုး၊ ပန်းစုံစိုက်၊ ဖယောင်းမီးတိုင်များကို ကောင်းမွန်စွာ လှုဒါန်းရမည်ဆင့်ဆို၍ စစ်ကဲ ၂
ယောက်သို့ အပ်ခဲ့သည်။ ပြီးလျှင် စေတီတော်က ဆင်း၍ လှည်းစီးမြဲစီးကြပြီးလျှင် ညောင်ဦးရွာ သင်္ဘောဆိပ်သို့လာကြသည်"
လွန်ခဲ့ပြီး နှစ် ၁ဝဝ ကျော်ကာလက ရှေးမြန်မာသံတမန်ကြီးတယောက်ရဲ့ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကို နိုင်ငံခြားခရီး အသွား၊
အပြန် ၂ ရပ်လုံးဝင်ရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုခဲ့ပုံအကြောင်း နှစ်သက်မိတာနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းဝေငှတာပါ။
ပြီးတော့လည်း ယနေ့ ခေတ်မှာ ကင်းဝန်မင်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားထွက်ခဲ့ချိန်ကလောက် သွားလာရေးမခက်တော့လို့ 
ရဟန်းရော လူပါ နိုင်ငံခြားသွားနေကြမယ့် ဘာမှတ်တမ်းမှတ်ရာမှ မရေးသားလို့စကားပြောရင်ရောက်ဖူးတယ်
လောက်သာ ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲဒီလို ခရီးသွားတွေ ကင်းဝန်မင်းကြီးခရီးသွားနည်းကို အတုယူစေချင်တယ်။
ကင်းဝန်မင်းကြီး၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံသွားနေ့ စဉ်မှတ်စာတမ်း၊ စာ ၂၆ဝ၊ ၂၆၁၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊
Posted by amaradipa at 3:47 PM No comments:
ပြင်သစ်သွားမြန်မာသံအဖွဲ့ရွှေစည်းခုံစေတီကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုခြင်း
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၃၅ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက်
ခရစ်နှစ် ၁၈၇၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက် ၊တနင်္လာနေ့ ……….
ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းဦးဆောင်တဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသွားမြန်မာသံတမန်အဖွဲ့ ညောင်ဦးရွာဆိပ်ကမ်းဆီ
ဆိုက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ရက်စွဲမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနှစ်အလိုအရ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၁၃၉ နှစ်၊
ခရစ်နှစ်အလိုအရဆိုရင် ၁၃၈ နှစ်ကြာညောင်းခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာသံအဖွဲ့ ၊ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး နဲ့သံတမန်အရာရှိ
၄ ဦးတို့ ဟာ မတ်လ ၁၄ ရက်မှာ မန္တလေး၊ သန်လျက်မော်ရွာဆိပ်ကမ်းကနေ သင်္ဘောနဲ့ခရီးစထွက်ခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့စစ်ကိုင်းမှာ ညအိပ်ရပ်နားပြီး မတ် ၁၅ မှာ စစ်ကိုင်းကနေခရီးဆက်ခဲ့ရာ မြင်းခြံရွာဆိပ်ကမ်းရောက်တယ်။
မြင်းခြံမှာ တညအိပ်ခဲ့ပြီး နောက်တရက် မတ် ၁၆ မှာ ခရီးဆက်နှင်တော့ ၄င်းနေ့၂ ချက်တီးမှာ ညောင်ဦးရွာဆိပ်
မြန်မာသံအဖွဲ့ ဟာ ညောင်ဦးမှာ ဒေသထွက်ကုန် ယွန်းထည်တွေကို နိုင်ငံခြားလက်ဆောင်ပေးဖို့ ဝယ်ယူကြတယ်။
အတူပါလာတဲ့ ပြင်သစ်သံတမန်များကိုလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီနောက် ပြင်သစ်နဲ့မြန်မာသံအဖွဲ့ တို့ 
ကိုယ်အစုနဲ့ ကိုယ်ဘာတွေလုပ်သလဲဆိုတာ ပြင်သစ်သွားနေ့ စဉ်မှတ်တမ်းမှာ ကင်းဝန်မင်းကြီးက အခုလို မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
"ပြင်သစ်သံအရာရှိတို့ အလိုရှိရာလှည့်ပတ်သည် ကာလစီးနင်းရန် လှည်းလှေမြင်းများကိုလည်း ပုဂံမြို့ အရာရှိတို့ 
က အသင့်ဆင့်ဆိုထားသည်။ ၄င်းနေ့ နေ ၃ ချက်တီးကျော် ၃ မောင်းအချိန် သံအရာရှိတို့သမ္ဗန်နှင့်လက်ဝဲဘက်
သို့ ကူး၍ သားငှက်ပစ်ကြသည်။
ကင်းဝန်မင်းကြီး၊ စာရေးတော်ကြီးမင်း၊ မြန်မာသံအရာရှိ၊ စာရေးလူငယ်တို့ မှာ ရွှေစည်းခုံဘုရားသို့ သွား၍ ပါသည်ပရိသတ်အကုန် ရွှေဆိုင်းရေ ၇၊ ဖယောင်းတိုင် ၃ဝဝဝ၊ ရေချမ်းအိုးပန်းစုံစိုက် ၂ဝဝ များကို ဝယ်ခြမ်းပြီးလျှင် ရွှေစည်းခုံဘုရားသို့ ဝင်၍ ဖယောင်းတိုင်၊ ပန်းစုံစိုက်ရေချမ်းအိုးများကို တင်လှုကြသည်။"
ဒီမှတ်တမ်းစာသားကြည့်ပြီး ငှက်ပစ်ထွက်သူထွက်၊ ဘုရားသွားသူသွားနဲ့ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာလုပ်နေကြတဲ့
မြင်ကွင်းကို စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ပြီးမြင်ယောင်မိတယ်။ ရန်ကုန် (သို့ မဟုတ်) မန္တလေးအခြေစိုက်ပြင်သစ်သံတွေ အတွက် မြန်မာသံအဖွဲ့ သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရတာကလွဲလို့ဘာမှစိတ်ဖိအားပြင်းပြင်း
ထန်ထန်ရှိဟန်မတူဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာ စိတ်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ တောပစ်ထွက်ကြဟန်တူပါရဲ့….။
မြန်မာသံအဖွဲ့ အတွက်တော့ ရေခြားမြေခြားခရီးအတွက်ရော တာဝန်ကြီးလေးမှုတွေအတွက်ပါ စိတ်ဖိအား
များနေပုံရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားခရီးကို ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ တာထွက်ချင်ပုံရတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မြန်မာ့မြေပေါ် ထေရဝါဒသာသနာစတင်ခြေချရာ ပုဂံမြေရောက်ခိုက် သာသနိကဘုရားစေတီကို ဖူးမြော်ဦးခိုက်လိုက်ချင်တဲ့ သဒ္ဓါ၊စေတနာကလည်း နှိုးဆော်တိုက်တွန်းပုံပေါ်ပါတယ်။
မည်သို့ ဆိုစေ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်မှု၊ နုတ်မှု၊ စိတ်မှု (ကံ)တွေကို ပုံဖော်ရာမှာ ကိုယ့်ဘာသာ၊ကိုယ့်ရိုးရာ၊ ကိုယ့်ဓလေ့စရိုက်တွေအရ လုပ်ကိုင်ကြတာကြောင့်မတူကွဲပြားတာကိုယှဉ်တွဲတွေ့ မြင်ရတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
မြန်မာသံအဖွဲ့ရွှေ ၇ ဆိုင်းဝယ်ပြီး ခွဲခြမ်းလှုဒါန်းပုံကိုလည်း မင်းကြီးက ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
"ရွှေဆိုင်း ၇ အနက် ရွှေဆိုင်း ၁ မှာ စေတီတော်တောင်ဘက်မျက်နှာ နတ်မုခ်နလျားခံတွင်းအတွင်းရှိ ဒက္ခိဏ
သာခါဘုရားကို ချလှုသည်။ ရွှေ ၅ ဆိုင်းမှာ စည်းခုံတော်ကြီးတွင် ကောင်းမွန်စွာချစေရန် စစ်သားသို့ အပ်ခဲ့
သည်။ ရွှေဆိုင်း ၁ မှာ ၁၂ ဌာနများမှာ အသီးချလှုကြသည်"
ရွှေ ၁ ဆိုင်းကို ၁၂ ဌာနမှာကပ်လှုတယ် ရေးပြီး ၁၂ ဌာနသရုပ်ကို မထုတ်ပြရင် ၁၂ ဌာနဆိုတာလောက်ပဲ သိရမယ်ပ…….။
၁၂ ဌာနသရုပ်ကို မင်းကြီးက အပြည့်အစုံမှတ်တမ်းပြုတယ်။ ကြည့်ပါ…။
-စည်းခုံတော်ကြီး ပထမရွှေ ၂ ပြား
-ပထမသပိတ် ဒုတိယရွှေ ၁ ပြား
-ရွှေသက်စိုးနတ် တတိယရွှေ ၁ ပြား
-အရှေ့ တောင်ထောင့် ရွှေခြင်္သေ့ စတုတ္ထရွှေ ၁ ပြား
-ဗြသမင်္ဂျီနတ်သမီး ပဉ္စမရွှေ ၁ ပြား
- ရွှေမြို့ စည်နတ် ဆဋ္ဌမရွှေ ၁ ပြား
- ရွှေစကားနတ် သတ္တမရွှေ ၁ ပြား
- ပွဲစားကြီးနတ် အဋ္ဌမရွှေ ၁ ပြား
- ရွှေငါးကြင်း နဝမရွှေ ၁ ပြား
- သိကြားမင်း ဒသမရွှေ ၁ ပြား
- ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား ဧကာဒသမရွှေ ၁ ပြား
ပေါင်း ဌာန ၁၁၊ ရွှေပြားရေ ၁၂ ၊ ၄င်းကို ၁၂ ဌာနခေါ်သည်"
အင်း….. ဌာန ၁၁ ခုကို ရွှေ ၁၂ ပြားကပ်ပြီး ၁၂ ဌာန ခေါ်တာ မျက်စိလည်မိတာတော့အမှန်ပဲ….။ မင်းကြီးက
ပညာရှိကြီးဆိုတော့ ပညာလက်ဆင့်ကမ်းတာလို့ ပဲ သဘောထားတော့မယ်နော်….။ ( ရွှေသက်စိုးနတ်၊ ဗြသမင်္ဂျီ
နတ်သမီးစတဲ့ နတ်တွေအကြောင်းလည်း လက်လှမ်းမှီသူတွေ ဗဟုသုတဝေငှကြဖို့အဘိယာစကပြုပါတယ်။)
အဲဒီ ၁၂ ဌာနမှာ ရွှေပြားကပ်လှုတော့ ဘာဖြစ်သလဲ၊ ဒေသခံတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဆိုပြီး မင်းကြီးက နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်
"၄င်း ၁၂ ဌာနကို သည်ကဲ့သို့ရွှေချလှုပြီး ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပြီးလျှင် ၄င်းရွှေလှောင်စက္ကူကို ဆောင်ယူကိုးကွယ်ရလျှင်
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြောင်း၊အလိုအတိုင်းပြီးစီးကြောင်းအစဉ်အဆက်ပူဇော်မြဲဖြစ်ကြောင်းများကို စစ်သား၊
အရံစောင့်အကြီး ကျေးရွာလူကြီးတို့ ပြောဆိုကြသည်"
ဒေသခံတွေယုံကြည်မှုကို မင်းကြီးက မှတ်ချက်တိုတိုပေးတယ်။
"ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မမဖြစ်၊ သို့ သော် ဗဟုသုတအကျိုးငှါ ရေးမှတ်ထားလိုက်သည်"……..တဲ့။ ကောင်းရော။
ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ (အယူကိုဖြောင့်မတ်မှန်ကန်အောင်ပြုခြင်း) ဆိုရာမှာ အရပ်သုံးစကားနဲ့ ပြောရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
တဦးဖြစ်ဖို့ အတွက် အသိဉာဏ်ပြည့်ဝတယ်၊ အသိဉာဏ်အရည်အသွေး စံချိန်မီတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီသတဲ့ အသိဉာဏ်ပြည့်ဝမှုကို အကြောင်းအရာ ၅ မျိုးနဲ့ အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
(က) ကုသိုလ်ကံ- အကုသိုလ်ကံ
(ခ) ကုသိုလ်ကံရဲ့ကောင်းကျိုး၊အကုသိုလ်ကံရဲ့ မကောင်းကျိုး
(ဂ) ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကံစွမ်းအင်ကြောင့် ရောက်ရမယ့် အခုဘဝ၊ နောင်အနာဂတ်ဘဝ
(ဃ) ငရဲ၊ ပြိတ္တာ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ
(င) ကောင်းမွန်စွာကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ဈာန်အဘိညာဉ်ရသူ၊ ရဟန္တာဖြစ်သူ
ဒီအချက် ၅ မျိုးကို လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတဲ့အခါ "ရှိနိုင်တယ်၊ ရှိသင့်တယ်၊ ရှိရမယ်"ဆိုတဲ့
အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ဒါ "အယူဖြောင့်တယ်"ခေါ်ပါတယ်။ ပြောင်းပြန်အတွေးအခေါ်၊ အသိဉာဏ်ပေါ်လာရင်တော့ အယူမဖြောင့်၊ အယူကောက်တယ် ဆိုရမယ်။ အယူကောက်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့အရည်အချင်းမမီဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။
အခုခေတ်မှာလည်း ရန်ကုန်က "ကြီး ၉ ကြီးဘုရားဖူးနည်း" ၊ "နေ့ နံအလိုက် သစ်သားဆင်းတုကိုးကွယ်နည်း"
တွေကို ကင်းဝန်မင်းကြီးသိရင် "ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မမဖြစ်" လို့မှတ်ချက်ပေးပြီး "မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ရင်
ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆတွေလည်း နားလည်အောင်လုပ်ကြဦးကွယ်ရို့ "လို့မချိတင်ကဲ ပြောလေမလားပဲ။
ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီးရဲ့ အံ့ဖွယ် ၉ ပါးအကြောင်းကိုလည်း မင်းကြီးက သူ့ မှတ်တမ်းမှာ မမေ့မလျော့
စာရင်းပြု မှတ်တမ်းတင်တာတွေ့ ရတယ်။
"စည်းခုံတော်ကြီးတွင်လည်း အံ့ဖွယ် ၉ ပါးရှိသည်။ ၉ ပါးမှာ……
- ထီးတော်ကို သံမဆိုင်းရသည်လည်း အံ့ဖွယ်တပါး
- အရိပ်တော်တံတိုင်းအတွင်းက မထွက်သည်လည်း အံ့ဖွယ်တပါး
- စည်းခုံတော်ပေါ်က ရွှေလှောင်စက္ကူတံတိုင်းပြင်သို့ မကျနိုင်သည်လည်းအံ့ဖွယ်တပါး
- တမျက်နှာကတီးသည်စည်သံကို တမျက်နှာကမကြားသည်လည်း အံ့ဖွယ်တပါး
- တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ ပွဲတော်အခါတွင် ပထမသပိတ်မှာ တစုံတယောက်ဆွမ်းဦးအောင်
- အဝေးကကြည့်လျှင်ကုန်း၊ အရံတွင်းသို့ ရောက်လျှင် ကျင်းကဲ့သို့ ထင်မှတ်ရသည်လည်း အံ့ဖွယ်တပါး
- တံတိုင်းအတွင်းသို့ပရိသတ်ဝင်၍မပြည့်နိုင်သည်လည်း အံ့ဖွယ်တပါး
- တံတိုင်းအတွင်း မိုးရေမတင်နိုင်သည်လည်း အံ့ဖွယ်တပါး
- တံတိုင်းအတွင်းရှိ ချရားပင် ၁၂ ရာသီအမြဲပွင့်သည်လည်း အံ့ဖွယ်တပါး
ပေါင်း အံ့ဖွယ် ၉ ပါးဟူ၍ အစဉ်ပြောဆိုမှတ်သားကြသည်"
ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီးရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ပန်း၊ ဆီမီး၊ ရွှေပြားကပ်လှုပူဇော်ကြောင်း၊ အံ့ဖွယ်အစုံစုံ
အကြောင်းမျှသာရေးခဲ့မယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့ပြီး နှစ် ၁၃၉ နှစ်က လူ့ အဖွဲ့ အစည်းပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းမပါလို့ 
"ခေတ်အရိပ်၊ ခေတ်ကြေးမုံ"မပါတဲ့ မှတ်တမ်းလို့ဆိုဖွယ်ရာဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ရဲ့
အနီးအပါးမှာ ခိုကိုးရာမဲ့သူတွေ မှီခိုနေထိုင်ကြတာကို အလွတ်မပေးဘဲ ကင်းဝန်မင်းကြီးရဲ့မှတ်တမ်းမှာ မိမိရရ
မှတ်တမ်းတင်တယ်။ ဒါဟာ ခေတ်ရဲ့ စာပန်းချီမြင်ကွင်းလို့ဆိုရင်မမှားတန်ရာ….။
"စည်းခုံတော်အတွင်း လှုဒါန်းပူဇော်ဖူးမြော်ဝင်ထွက်ကြည့်ရှုမှတ်သားကြပြီးလျှင် ၄င်းနေ့ ညနေ ၄ ချက်တီးအချိန်မှ
တံတိုင်းတွင်းက ထွက်ခဲ့ကြရ၍ အရှေ့ စောင်းတန်းမုခ်ပေါက်သို့ ရောက်လျှင် ဒုက္ခိတလူကြီးလူငယ်မိန်းမ
ယောက်ျား ၈ဝ ကျော်တို့ ကို အစေ့အငှပေးဝေခဲ့သည်"
ရတနာပုံရွှေမြို့ တော်က ပဉ္စမသံဂါယနာတင်မင်းမြတ်ရဲ့ လက်ရုံးတဆူဝန်ကြီးတပါး ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကို လာရောက်ကြည်ညိုပြီး စွန့် ကြဲပေးကမ်းတယ်ဆိုတာ ဆင်းရဲသားဒုက္ခိတများအတွက် သဲကန္တာရထဲကအိုအေစစ်
စခန်းမှာ တနေ့ တာကွန်းခိုရတာနဲ့တူနေမလားပဲ…။ န.ဝ.တ၊ န.အ.ဖ ခေတ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ၊ ဝန်ကြီးတွေ ဘုရားဖူးလာတယ်ဆိုရင် သာမန်ဘုရားဖူးကအစ၊ ဈေးသည်၊ သူတောင်းစားအဆုံး အာဏာသုံးမောင်းထုတ်ပြီ်း
ဘုရားစေတီပရဝုဏ်တခွင် ရှင်းလင်းထားတာမျိုး ကင်းဝန်မင်းကြီး ရွှေစည်းခုံစေတီလာစဉ်တုန်းကမရှိခဲ့ဘူး
မတ် ၁၆ ရက်ညမှာ ပြင်သစ်နဲ့ မြန်မာသံတမန်များအိပ်စက်အနားယူကြရာနေရာကိုလည်း မှတ်တမ်းမှာ ညွှန်ပြထားလေရဲ့….။
"၄င်းအရှေ့ စောင်းတန်းအဆင်းတောင်ဘက်ဇရပ်တွင် ဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးနှင့် သံအရာရှိတို့၎င်းနေ့ ည
အိပ်နေကြသည်။ ပြင်သစ်သံအရာရှိတို့ မှာ ညောင်ဦးရွာဆိပ်ကမ်းသင်္ဘောပေါ်တွင် အိပ်နေကြသည်"
မတ် ၁၇ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ဟာ မြန်မာပြက္ခဒိန်အလို တပေါင်းလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက် (လကွယ်၊ဥပုသ်နေ့ ) ဖြစ်နေတယ်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးနဲ့ အဖွဲ့ ဟာ မတ် ၁၇ နံနက်အရုဏ်တက်မှာ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်မှာ ဆွမ်းတော်ကြီးကပ်လှုခဲ့တာကို မှတ်တမ်းမှာတွေ့ ရပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်မှာညအိပ်တဲ့ ပြင်သစ်သံအဖွဲ့ ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကိုတော့ မှတ်တမ်းမှာမတွေ့ ရတော့ပါ။ ဒါကြောင့် သင်္ဘောပေါ်ညအိပ်တက်သွားပြီးနောက် ကုန်းပေါ်ပြန်ဆင်းလာခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
"၄င်းလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက် ၊ အင်္ဂါနေ့ စည်းခုံတော်ကြီးအရှေ့ စောင်းတန်းအနီး ဇရပ်တွင် ချရပ်တည်းနေပြီးလျှင် အရုဏ်ဆွမ်းကပ်လှုရန် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်၍ အရုဏ်တက်လျှင်တက်ချင်း စည်းခုံတော်ကြီးရင်ပြင်တော်သို့ သွား
ရောက် ဆွမ်းတော်ကြီးကပ်လှုကြသည်။ ပြီးလျှင် တောင်မုခ်စောင်းတန်းကဆင်း၍ ပုဂံမြို့ သို့ ထွက်လာခဲ့ကြသည်"
ကင်းဝန်မင်းကြီး၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံသွားနေ့ စဉ်မှတ်စာတမ်း၊ စာ ၁၉၊၂ဝ၊ စတုတ္ထအကြိမ်၊ ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်။
Posted by amaradipa at 9:47 PM No comments:
Posted by amaradipa at 6:36 PM No comments:
၆၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ရှင်အတွက် မွေးနေ့ ဆုတောင်း
ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့ မွေးနေ့ ကဗျာတပုဒ်နဲ့မွေးနေ့ ရှင်ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ပြည်သူ့ အောင်ပန်း၊ မြဲဆင်မြန်းသည့်
တို့အားတို့ အင်၊ တို့ အရှင်ကို
မွေးသောနေ့ မှာ၊ တို့ သူငါသည်
Posted by amaradipa at 3:37 PM No comments:
ရခိုင်ဒေသပဋိပက္ခဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ RFA မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် ဦးကျော်ကျော်အောင်နှင့်
ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီဆရာတော် ရမ္မာဝတီဦးပညာစာရတို့ ၏ အမေးအဖြေ (၆-၁၂-၂ဝ၁၂)
ဦးကျော်ကျော်အောင်။ ။"အရှင်ဘုရား… အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုဆရာတော့်အနေနဲ့ 
ဘယ်လိုများသုံးသပ်ပါသလဲဘုရား၊ ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိ ကြီးထွားလာရသလဲဆိုတာ ပြောပြပါဘုရား"။
ဦးပညာစာရ။ ။ "ထိန်းသင့်ထိန်းထိုက်တဲ့အချိန်မှာ လိုက်မထိန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပ်နဲ့ ထွင်ရမယ့်ကိစ္စကို
ကျောက်နီမော် ကိစ္စဖြစ်တယ်၊အဲဒီမှာလူထုစိတ်ကျေနပ်အောင်ထိန်းသိမ်းလိုက်လို့ ရှိရင်အဲဒါငြိမ်သွားလိမ့်မယ်။
အဲဒါတောင်ကုတ်ပြဿနာပေါ်လာတဲ့အခါ မကျေနပ်တဲ့အုပ်စုက နောက်တမျိုးဖြစ်လာတယ်။ အားတင်နိုင်တဲ့အုပ်စုက နောက်တမျိုးဖြစ်လာတယ်။
အဲဒီမှာ NLD ဒေါ်စုတို့ ပါတီ..အဲဒီပါတီကတာဝန်ကို…ဒေသလူထုအသိဉာဏ်ကို အကဲမခတ်ဘဲနဲ့ကမ္ဘာ့လမ်းကြောင်း
ကပြောလိုက်တာလည်း တဖက်ကို အားပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒေါ်စုပြောတာကိုကြားလိုက်တယ်၊" လူနည်းစုကို လူများစု အနိုင်ကျင့်တာ မကောင်းဘူး။လူများစုဟာ လူနည်းစုကို ညှာတာရမယ်၊" အဲဒီစကားဟာ ကမ္ဘာ့ လမ်းကြောင်းမှာတော့
Posted by amaradipa at 5:51 PM No comments:
Rohingya with two faces
Posted by amaradipa at 2:03 PM No comments:
Posted by amaradipa at 1:43 PM No comments:
ရမ်းဗြဲမြို့ -ကျောက်နီမော်ရွာ-တောင်ကုတ်မြို့(ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသ) -မောင်တောမြို့ -ပြည်နယ်မြို့ တော်စစ်တွေ (ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသ)များတွင် ပြည်ဖျက်မီးအရှိန်မြှင့်တောက်လောင်နေပါပြီ---။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်၊ ဒေသခေါင်းဆောင်၊ လူထုခေါင်းဆောင်၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ အပြော၊ အလုပ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တချက်ကလေးမှားရုံဖြင့် အနောက်တံခါးဟင်းလင်းပွင့်ကာ တိုင်းရင်းသားညီနောင်များ၏ သမိုင်းနိဂုံးကို ရေးထိုးရမည့်ကိန်းဆိုက်ပါလိမ့်မည်။ အမရဒီပ ၆-၉-၂ဝ၁၂
Posted by amaradipa at 5:46 PM No comments:
ရခိုင်ဒေသ၏ ယနေ့ အခြေအနေသည် တစစအရှိန်မြင့်တက်လာသော မီးတောက်မီးလျှံသဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ လူမျိုးရေးအခြေခံ အမြင်မကြည်လင်မှု၊ဘာသာရေးအခြေခံ အယူအဆကွဲပြားခြားနားမှုသည် ကမ္ဘာ့ နေရာတိုင်း လိုလိုမှာ ရှိခဲ့သည်။ ရှိဆဲဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ဒေသမှာလည်း မတူခြားနားမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ရှိဆဲပင်…..။ အတ္တစိတ်လွန်ကဲသော အစွန်းရောက်အတွေးအမြင်ဖြင့်"ဒီဒေသဒီနေရာမှာ ဒီလူမျိုးသာ ရှိရမည်၊ ဟိုလူမျိုးမရှိရ"ဟုလည်းကောင်း၊ "ဒီဒေသဒီနေရာမှာ ဒီဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်သူသာ ရှိရမည်၊ ဟိုဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်သူမရှိရ"ဟုလည်းကောင်း ယူဆမိတတ်သည်။ ယင်းအယူအဆသည် ပြဿနာ၏အခြေခံ ဖြစ်လာတတ်သည်။လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးအမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုသည် ကြောက်စရာကောင်းပါသည်။ ကမ္ဘာ့ပြဿနာအများစုလိုလိုမှာ လူမျိုးရေး-လူမျိုးစွဲအမြင်ကျဉ်းမှု၊ ဘာသာရေး-ဘာသာစွဲအမြင်ကျဉ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားရသည်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာနိုင်သည်။ လူမျိုး-ဘာသာမတူသူများနှင့်အတူယှဉ်တွဲနေကြရာဝယ် လူမျိုးရေး-ဘာသာရေးအစွဲအမြင်ဖြင့် တဘက်သားအပေါ် အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်မယူမိစေရန် အထူးအရေးကြီးသလို တဘက်ကအနိုင်ယူရေးအတွက် အားစမ်းလာလျှင်လည်း အရှုံးမပေးမိစေရန် အထူးအရေးကြီးသည်။ ယနေ့ ရခိုင်ဒေသရှိ ဘက် ၂ ခုဟုဆိုနိုင်သော အင်အားစုများသည် "အနိုင်မခံအရှုံးမပေး"စိတ်ဓာတ်မွေးမြူစေလိုပါသည်။ " အနိုင်မခံအရှုံးမပေး"ဟူသောစကား၏ဆိုလိုရင်းမှာ အင်အားစု ၂ ရပ်သည် ကိုယ့်စည်းနှင့်ကိုယ် နေထိုင်ကြရေးပင် ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အင်အားစုမှဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်စည်းနှင့်ကိုယ်မနေဘဲ ပြဿနာများ၊ အမှားအယွင်းများ၊၊ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်ပါက အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ထိရောက်မြန်ဆန်မှန်ကန်သော ဘက်မလိုက်တရားစီရင်ရေးစနစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်များလည်း ရခိုင်ဒေသမှာ အလျင်အမြန်လိုအပ်နေကြောင်း လေ့လာတွေ့ ရှိရပါသည်။ အမရဒီပ ၆-၈-၂ဝ၁၂
Posted by amaradipa at 4:42 PM No comments:
Taungpulutawya Kabaraye Sayadaw Ashin Nandiya's Wrong Idea on Tiratana
Posted by amaradipa at 2:34 PM No comments: